nv-tegra.nvidia.com Git - android/platform/packages/providers/DownloadProvider.git/blob - res/values-my-rMM/strings.xml
Merge "Import translations. DO NOT MERGE" into nyc-dev
19 <string name="app_label" msgid="3658948994665187911">"ဒေါင်းလုပ်မန်နေဂျာ"</string>
20 <string name="permlab_downloadManager" msgid="7779544811202855500">"ဒေါင်းလုပ်မန်နေဂျာကို သုံးစွဲခွင့်ပြုမည်"</string>
21 <string name="permdesc_downloadManager" msgid="4237406545998908947">"အပလီကေးရှင်းအား ဒေါင်းလုပ်မန်နေဂျာကို သုံးစွဲနိုင်ရန်နှင့် ဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ရန်အတွက်သုံးခြင်းကို ခွင့်ပြုမည်။ အန္တရာယ် ရှိသော အပလီကေးရှင်းများက ၎င်းကို အသုံးပြုကာ ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ခြင်းကို နှောက်ယှက်ခြင်းနှင့် ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များကို ဝင်ရောက်ယူနိုင်သည်။"</string>
22 <string name="permlab_downloadManagerAdvanced" msgid="7103642833308809655">"အဆင့်မြင့် ဒေါင်းလုပ်မန်နေဂျာ လုပ်ငန်းများ"</string>
23 <string name="permdesc_downloadManagerAdvanced" msgid="2659546004160962761">"အပလီကေးရှင်းအား ဒေါင်းလုပ်မန်နေဂျာ၏ အဆင့်မြင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို သုံးစွဲခွင့်ပြုမည်။ အန္တရာယ် ရှိသော အပလီကေးရှင်းများက ၎င်းကို အသုံးပြုကာ ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ခြင်းကို နှောက်ယှက်ခြင်းနှင့် ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များကို ဝင်ရောက်ယူနိုင်သည်။"</string>
24 <string name="permlab_downloadCompletedIntent" msgid="945913803765675685">"ဒေါင်းလုပ်နှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်းကြားချက် အားလုံးကိုပို့မည်"</string>
25 <string name="permdesc_downloadCompletedIntent" msgid="2094706189855699533">"အပလီကေးရှင်း အား ဒေါင်းလုပ်ပြီးဆုံးပါက အကြောင်းကြားရန် ခွင့်ပြုမည်။ အန္တရာယ် ရှိသော အပလီကေးရှင်းများက ၎င်းကို အသုံးပြုကာ ဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်ပြုထားသော အပလီကေးရှင်းကို ရောထွေးအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။"</string>
26 <string name="permlab_seeAllExternal" product="nosdcard" msgid="4084575448409212628">"ဒေါင်းလုပ်အားလုံးကို USBသိုလှောင်ကတ်ထဲတွင် ကြည့်မည်"</string>
27 <string name="permlab_seeAllExternal" product="default" msgid="140058400609165726">"ဒေါင်းလုပ်အားလုံးကို SDကတ်ထဲတွင် ကြည့်မည်"</string>
28 <string name="permdesc_seeAllExternal" msgid="1672759909065511233">"အပလီကေးရှင်းအား SDကဒ်ထဲရှိ မည်သည့်အပလီကေးရှင်းမှမဆို ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ထားသည်များကို သုံးစွဲခွင့်ပြုမည်။"</string>
29 <string name="permlab_downloadCacheNonPurgeable" msgid="3069534308882047412">"ဒေါင်းလုပ်ယာယီသိမ်းရန်နေရာတွင် ကြိုတင်နေရာယူထားမည်"</string>
30 <string name="permdesc_downloadCacheNonPurgeable" msgid="2408760720334570420">"အပလီကေးရှင်းအား ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ထားသောဖိုင်များကို ဒေါင်းလုပ်မန်နေဂျာမှ နေရာလွတ်လိုအပ်လျှင်အလိုအလျောက်ဖျက်မရသော ယာယီသိမ်းဆည်းရန်နေရာထဲသို့ ထည့်ရန် ခွင့်ပြုမည်"</string>
31 <string name="permlab_downloadWithoutNotification" msgid="8837971946078327262">"အကြောင်းမကြားပဲ ဖိုင်များကို ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်မည်"</string>
32 <string name="permdesc_downloadWithoutNotification" msgid="8483135034298639727">"အပလီကေးရှင်းအား အသုံးပြုသူအား မည်သည့်အကြောင်းကြားချက်မျှမပေးပို့ပဲ ဒေါင်းလုပ်မန်နေဂျာမှတစ်ဆင့် ဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ရန် ခွင့်ပြုမည်။"</string>
33 <string name="permlab_accessAllDownloads" msgid="2436240495424393717">"စနစ်၏ ဒေါင်းလုပ်အားလုံးကို သုံးစွဲခွင့်ပြုမည်"</string>
34 <string name="permdesc_accessAllDownloads" msgid="1871832254578267128">"အပလီကေးရှင်းအား စစ်စတန်ပေါ်ရှိ မည်သည့်အပလီကေးရှင်းမှ ဒေါင်းလုပ်ကိုမဆို ကြည့်ခြင်း သို့မဟုတ်ပြင်ဆင်နိုင်ရန် ခွင့်ပြုသည်"</string>
35 <string name="download_unknown_title" msgid="7015124071247271585">"အမည်မသိ"</string>
36 <string name="notification_download_complete" msgid="5443563299253103667">"ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပြီး"</string>
37 <string name="notification_download_failed" msgid="8612136111952014978">"ဒေါင်းလုပ်မအောင်မြင်ပါ"</string>
38 <string name="notification_need_wifi_for_size" msgid="2556172885154833575">"ဒေါင်းလုပ်ပမာဏမှာ ဝိုင်ဖိုင်လိုအပ်သည်"</string>
39 <string name="notification_paused_in_background" msgid="4328508073283591772">"နောက်ခံတွင် ခဏဆိုင်းထားသည်"</string>
40 <string name="wifi_required_title" msgid="1995971416871498179">"ဒေါင်းလုပ်မှာ အော်ပရေတာကွန်ယက်အတွက် ကြီးလွန်းသည်"</string>
41 <string name="wifi_required_body" msgid="3067694630143784449">"ဤ <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g> ဒေါင်းလုပ်ကို ပြုလုပ်ရန် ဝိုင်ဖိုင် ချိတ်ဆက်ထားရပါမည်၊ \_n\_nနောက်တစ်ခါ ဝိုင်ဖိုင်ကိုချိတ်ဆက်လျှင် ဒေါင်းလုပ်စတင်ရန် <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s </xliff:g> ကို တို့ထိပါ။"</string>
42 <string name="wifi_recommended_title" msgid="7441589306734687400">"နောက်မှ ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ရန် တန်းစီထားမလား?"</string>
43 <string name="wifi_recommended_body" msgid="1314735166699936073">"ဤ <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g>ဒေါင်းလုပ်ကို စတင်ခြင်းမှာ သင့်ဘက်ထရီ သက်တမ်းကို တိုစေသည် သို့မဟုတ် သင့်ဒေတာပလန်ပေါ် မူတည်၍ ကျသင့်ငွေ ပိုကုန်စေမည့် မိုဘိုင်းဒေတာ ချိတ်ဆက်မှုကို အလွန်အကျွံ သုံးနိုင်သည်။ \_n\_n နောက်တစ်ခါ ဝိုင်ဖိုင်ချိတ်ဆက်လျှင် ဒေါင်းလုပ်စတင်ရန် <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s</xliff:g> ကို တို့ထိပါ။"</string>
44 <string name="button_queue_for_wifi" msgid="422576726189179221">"တန်းစီရန်"</string>
45 <string name="button_cancel_download" msgid="2430166148737975604">"ထားတော့"</string>
46 <string name="button_start_now" msgid="792123674007840864">"ယခုအချိန်မှစတင်ပါ"</string>
48 <item quantity="other"><xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> ဖိုင်များကို ဒေါင်းလုဒ် လုပ်နေပါသည်</item>
49 <item quantity="one">ဖိုင် ၁ ခုကို ဒေါင်းလုဒ် လုပ်နေပါသည်</item>
52 <item quantity="other"><xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>ဖိုင်များကို စောင့်နေပါသည်</item>
53 <item quantity="one">ဖိုင် ၁ ခုကို စောင့်နေပါသည်</item>
55 <string name="download_remaining" msgid="3139295890887972718">"<xliff:g id="DURATION">%s</xliff:g> ကျန်ရှိသည်"</string>
56 <string name="download_no_application_title" msgid="7935659741162801699">"ဖိုင်အား ဖွင့်မရပါ"</string>
57 <string name="root_downloads" msgid="4098414876292351487">"ဒေါင်းလုပ်များ"</string>
58 <string name="download_queued" msgid="3302638231377947451">"တန်းစီထားပြီး"</string>
59 <string name="download_running" msgid="3925050393361158266">"ပြုလုပ်နေဆဲ"</string>
60 <string name="download_error" msgid="5144180777324573236">"မအောင်မြင်ပါ"</string>
61 <string name="download_running_percent" msgid="4305080769167320204">"လုပ်ဆောင်နေဆဲ၊ <xliff:g id="PERCENTAGE">%s</xliff:g>"</string>